Defining Oracle Dashboard - ITS Tech School
Defining Oracle Dashboard
Kedu ihe bụ Oracle Dashboard?
Kedu ihe e ji ederede nwere:
Ihe na-esi na nyocha dị iche iche pụta
Ịnweta ọdịnaya na ntanetrị Oracle
Ònye na-elekọta na-agbanwe ma ọ bụ na-agbanwe agbanwe?
Ihe ndị a ga-agbakwunye na peeji nke dashboard
Kedu ihe na-eme nyocha nke Oracle Dashboard?
Oracle dashboard bụ a nchịkwa azụmahịa azụmahịa, na ihe na-akpata azụmaahịa nke azụmahịa bụ igosi mkpakọrịta ihe nkedo nke igbu egbu (KPI) na ọnọdụ ya nke ugbu a. N'ikpeazụ, ndị na-eji mgbidi na-eme ka ọnụọgụgụ, ọnụọgụ, na mkpochapụ egbugbere ọnụ n'otu ákwà ngebichi.
A dashboard nwere ọ dịkarịa ala otu ibe, na ibe nwere ike igosipụta ihe ọ bụla ị nwere ike imeghe ma ọ bụ nweta na usoro weebụ gị. Peeji nke nwere ike igosi:
Ihe nchoputa nke nchoputa ebe a na-ekwu maka mmeputa nke usoro nlekota ihe omuma nke Oracle nke na-agbanwe na nyocha nyocha. Mkpụrụ ahụ nwere ike ịpụta na echiche gbanwere, dịka ọmụmaatụ, eserese, ọnụ, na tebụl. Ndị ahịa nwere ike kwatuo ma lee anya na ihe ndị ahụ pụta, chekwaa dika PDF, bipụta dịka HTML ma ọ bụ PDF, ma ọ bụ na-ebute ihe ọ ga-esi na teepu.
Ịkwado ndị ọrụ
Njikọ na saịtị
Njikọ ọrụ na menus njikọ
Atụ anya nke envelopes n'ime akwụkwọ mmalite Oracle BI
Njikọ na akụkọ
Na-ekesa akụkọ maka Oracle BI
Ihe arụnyere dịka akụkọ ma ọ bụ ibe saịtị
Atụ anya nke envelopes na ndepụta mmeghe
Mgbe ị mepee akara ahụ, ihe dị na ya na-egosi n'otu ma ọ bụ ibe. Ị nwere ike ịmata ọdịiche dị na peeji nke dashboard site na taabụ n'elu n'elu akụkụ ụfọdụ nke dashboard. N'elu aka nri nke eriri, ị ga-ahụ ngwaọrụ nke na-enye gị ike:
Gbanwee akara ngosi ahụ nyere gị uru na ikike
Gosi nhọrọ dịgasị iche iche iji rụọ ọrụ na peeji nke dashboard; ihe atụ bụ nhọrọ ị ga-ebipụta ugbu a.
Iji mee nkata ihu, otu ga-enwerịrị uru Dashboard na-achịkwa, onye nlekọta na-arụkọkwa uru.
Naanị ndị nwere uru kwesịrị ekwesị ma kwenye na ndetu, na ihe ndị a ga-atụkwasị na ya, nwere ike ime mgbanwe na-agbanwe agbanwe. Kedu ihe ọzọ, a na-eme mgbanwe ngbanwe site na peeji nke dashboard.
Onye na-emepụta ihe na-enye gị ikike ịnye ndepụta peeji nke ma gbanwee peeji ndị ahụ. I nwekwara ike ijikwa usoro nke ibe ma gbakwunye isiokwu na dashboard.
Edere nwere ebe na ngalaba na-ejide ihe ejiri ihe dashboard ahụ. Ntughari ọ bụla nwere ihe na-erughị otu peeji nke ọcha.
Taabụ n'elu enyemaka dashboard ahụ iji ghọta peeji nke dashboard. Akwụkwọ dị iche iche na-enyere aka idozi ọdịnaya. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịnwe otu ibe maka iwepụ nkwụpụta site na nyocha gị kwa ụbọchị, ibe ọzọ nwere njikọ na saịtị na ndị na-enye gị na ibe ọzọ nke na-ejikọta na intranet gị.
Dashboard ihe - Ndị a bụ ihe na-arụ ọrụ naanị na a dashboard. Akụkụ nke ihe ndị e ji edepụta ihe na-ejikọta ihe omume, ngalaba nke jigide ọdịnaya, ma tinye ihe e gosipụtara na njedebe dị n'ime mbadamba.
Depụta ihe - Ihe ndị ị na-eme ma ọ bụ onye ọzọ na-azụ ahịa echerela na nchịkwa mmalite nke azụmahịa nke Oracle nke ịchọrọ ịchọrọ. Ihe ngosi na-akpali, nyocha na nke ahụ bụ nanị mmalite.
Dịka ọmụmaatụ, ọnụnọ nke aabụ a, a na-achịkwa nhazi ọdịnaya na ntọala nke:
Skins - Ha na-ejikwa ihe ngosi nke ọkpụkpọ Oracle, dịka ọmụmaatụ, akwụkwọ ndekọ ụlọ ọrụ, ntọala ụkwụ, na ụdị akwụkwọ. N'okwu mgbe ndị ahịa na-abanye na ya, akpụkpọ anụ nwere ike ịbụ nkewa nke abụọ na-ekesa ha. Ndị nchịkwa nwere ike ime ka akpụkpọ ọhụrụ ma ọ bụ gbanwee ihe ndabara.
Ụdị - Ọfọn, n'ụdị na-achịkwa nhazi nke nsonaazụ maka ngosi. Ụdị nhazi a gụnyere ndò nke njikọ na ihe odide, nha na ederede nke ọdịnaya, ihe onwunwe na onyinyo nke eserese, mpụga na tebụl, nke ahụ bụkwa mmalite.
Ugboro na-abata na ndị nhazi nke na-agụnye igbe ejiji Style (ihe ndekọ nwere ihe .css ndọtị), usoro ihe osise na foto. Ndị nchịkwa nwere ike ịme ụdị akwụkwọ ọhụrụ ma gbanwee ndị ọzọ.
Ndị ahịa nwere ike idozi ihe ụfọdụ n'ime ụdị akwụkwọ ndị a gụnyere gụnyere ọdịnaya ọdịnaya na ụda tebụl mgbe nhazi dị. Ha nwere ike iji usoro taabụ mezuo nke a.
Nhazi nke ịchọ mma - Nhazi nke ịchọ mma bụ ihe na-emetụta ihe ngosi nke vashboard na nsonaazụ. Ị nwere ike itinye ya na ngalaba, ngalaba na results.Adding na-akọ na ibe ederede
Ka ị na-eji Ngwá Ọrụ Oracle, ị nwere ike tinye ma ọ dịkarịa ala otu akụkọ na peeji nke dashboard. Na-eme ya n'agbanyeghị na-adọrọ mmasị na ị nwere ike ịnye gị akụkọ na ndị ọzọ ahịa na-eji ndị ọrụ na-eme atụmatụ peeji nke dashboard.
Onye ọkachamara ga-ezigara onye ahịa ya dum, nke ahụ gụnyekwara otu n'ime ibe ozi nke akụkọ ahụ gụrụ.
Mgbe ị na-emepụta onye ọkachamara maka ndepụta ihuenyo nke nwere akụkọ gbasara ego na-ekesa akụkọ, cheta ihe ndị na-esonụ:
Nhazi nkesa BI na-ekwesịrị ịdị na PDF
A ghaghị ịhazi ọkachamara iji wepụta PDF usoro
Mgbe ị na-agbakwụnye azịza maka peeji nke dashboard, ị nwere ike ime ya dị ka njikọ ma ọ bụ tinye ihe. Ejiri ya na-egosi na a na-egosipụta akụkọ ahụ n'ụzọ ziri ezi na nke dị na peeji nke dashboard.
Esi nweta ihe nrite nke Solaris - 1z0821 & 1z0876